“ရွှေ” နှင့်ပတ်သတ်လို့ ဗဟုသုတ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “ရွှေ” နှင့်ပတ်သတ်လို့ ဗဟုသုတ
“ရွှေ” နှင့်ပတ်သတ်လို့ ဗဟုသုတ
Posted by ​မောင်​မိုဘိုင်း on Nov 22, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
-၁၅ဲ ရည် (ဆယ့်ငါးပဲရည်)
– ဒင်္ဂါးရည် (သို့) ၁၂ ရွေးစပ်
-၁၄ဲ ရည် (ဆယ့်လေးပဲရည်)
မီးလင်း နှင့် အခေါက်သည် အတူတူ ခေါ်ဝေါ်ပုံသာကွဲသည် ရွှေဈေး အသုံးအနှုန်းကို
အခေါက်ရွှေနှင့်သာ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သူများ အသုံးပြုပြောကြားကြသည်။
အခေါက်ရွှေဆိုသည်မှာ ၉၉.၉၉ ရာခိုင်နှုန်းဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ၁၅ဲ ရည်ဆိုသည်မှာအခေါက်ရွှေ ၁၅ဲ
သားနှင့် ကြေးနီ+ဘော် အချိုးကျ ၁ဲ(တစ်ပဲ) သားနှင့်ရောစပ်ပြီး
ဒင်္ဂါးရည် (သို့) ၁၂ ရွေးစပ်ဆိုသည်မှာလည်း အခေါက်ရွှေ ၁၁၈ ရွေးကို ကြေးနီ+ဘော် ၁၂
၁၄ဲရည်(ဆယ့်လေးပဲရည်) ဆိုသည်မှာလဲ ထိုနည်း၎င်း အခေါက်ရွှေ ၁၄ဲ (ဆယ့်လေးပဲ)သားကို
ကြေးနီနှင့် ဘော်အချိုးကျ ၂ဲသား(နှစ်ပဲသား) ရောစပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။
ရွေးသုံးဆယ်စပ် ဆိုတာကတော့ အခေါက်ရွှေ သုံးမတ်သား ရွေး (သို့) ၁၂ဲ သားကို ကြေးနီနှင့်
ဘော် အချိုးကျ ၁ မတ်သားရောစပ်၍ တစ်ကျပ်သား ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်သည်။
မိုးကြိုး- ဆိုသည်မှာတော့ အခေါက်ရွှေ တစ်မတ်သား (၄ဲ) ကို ကြေးနီ နှင့်ဘော် အချိုးကျ
သုံးမတ်သား(၁၂ဲ)သားရောစပ် ၍တစ်ကျပ်သားဖြစ်အောင်ပြုလုပ် ထားတာဖြစ်တယ်။
အခေါက်ရွှေတစ်ကျပ်သား ဈေးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိရင် ကျန်တဲ့အရွှေအမျိုးအစားတွေ
ရဲ့ဈေးဟာလဲ ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ဒီလို ဒီလို ဖော်မြူလာလေးတွေ ရှိတယ် . . . . .
အခေါက်ရွှေ ဟာပျော့တယ် ကြေးနီနှင့်ဘော် ပါဝင်နှုန်းများလာလေ ရွှေဟာအရည်ညံလေ
မာလာလေဖြစ်ပါတယ်။ အခေါက်ရွှေကို မီးနဲ့ နီရဲးလာအောင် အပူပေး ရေထဲသို့ ချလျှင်သော်၎င်း
တစ်ခြားဆိုင်သို့ရောင်လျှင်သော်၎င်း ဈေးအနှိမ်ခံရပါတယ်။ အဲ့ဒါက ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ရွှေထည်တစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဂဟေဆော်ရတယ်။ အဲ့ဒီဂဟောဆော်ဖို့က
အထည်လုပ်မည့်ရွှေ အမျိုးအစား ၂ ဆကို ကြေးနီနှင့်ဘော် ဆတူဝန်းကျင် ရောစပ်ထားတဲ့ စပ်ခဲ ၁
တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ပဲဝန်းကျင်သာ အတင်ချိန်ရှိတဲ့ နားကပ် လက်စွပ် တစ်ခုခုပြုလုပ်ပါကလဲ စပ်ခဲ ၁
ရွေး ၂ ရွေးအထိဝင်ပါတယ်။ နားကပ်တစ်ရံဆိုပါစို့ ရွှေချိန်က ၁ဲ သားပဲရှိတယ် စပ်ခဲက ၂
ရွေးလောက်ဝင်နေတယ်။ ရွှေက ၅ ရွေးခွဲပဲကျန်တော့တယ်။ ဆိုင်ကကိုယ်ဝယ်ခဲ့တော့ ၁ဲ
ဖိုးပေးခဲ့ရတယ်။ တစ်ကယ်တမ်း ရွှေပါတာက ၁ဲ မပြည့်ဘူး။ အလျှော့တွက်လက်ခက ၃
ရွေးလောက်ပေးရတယ်။ ကိုယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် အတင်ချိန်+အလျှော့တွက်လက်ခ ၁၀.၅
ရွေးဖိုးပေးခဲ့ရတယ်။ တစ်ကယ်တမ်း အဲ့ဒီအထည်မှာ ပါတဲ့ရွှေက ၅ ရွေးခွဲးလောက်ပါတယ်။ ဒါကို
မိမိဝယ်ယူတဲ့ဆိုင်မှာ ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် ပြဿနာမရှိဘူး ရွှေချိန် ၁ဲ ကိုလဲ ၁ဲ ဖိုးပြန်ပေးတယ်။
အလျှော့တွက်လက်ခ ၃ ရွေးယူထားတာကိုလဲ အထည်မပျက်စီးသေးဘူးဆိုရင်
တစ်ဝက်ဖိုးပြန်ပေးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မိမိဝယ်ယူတဲ့ဆိုင်ကို ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် အလျှော့တွက်
တစ်ဝက်လောက်ပဲရှုံးတယ်။ အခြားဆိုင်မှာ သွားရောင်းမယ်ဆိုပါက သူတို့လုပ်ထားတဲ့
အထည်မဟုတ်တဲ့အတွက် လက်ရှိအထည်မှာပါတဲ့ ရွှေတန်ဖိုးကိုပဲ တွက်ဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်အနေဖြင့် မိမိရောင်းလိုက်သော အထည်မိမိဆီပြန်မလာလေ ကြိုတ်လေပဲ။
တစ်ချို့ရွှေဆိုင်တွေက ကျတော့လဲ ရွှေအရည်မပြည့်မှိဘူး ၁၅ဲ ရည်ဆိုရင် ၁၄ဲ
ရည်လောက်ပဲရှိတယ်။ တစ်ကျပ်သားကို တစ်ပဲ ပိုစပ်ထားတဲ့အတွက် တစ်ပဲ ကို လေးသောင်း
ငါးသောင်း ၀န်းကျင်မှာရှိတယ်။ တစ်ရက်ကို နှစ်ကျပ်သားရောင်းရရင် တစ်သိန်းလောက်က
အလျှော့တွက် လက်ခ မပါသေးဘူး ပိုစပ်ထားတဲ့အတွက်နဲ့တင်မြတ်နေပြီ။ ပြန်လာရောင်းတော့
ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လဲ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ဟာ ကိုယ်ပြန်ပေးရတာ။ ကြားထဲမှာ
ငွေသုံးရတာပေါ့။ ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုရင် အမြတ်ကျန်နေလိုက်တာပေါ့။ တစ်ကယ်တော့ ဒါဟာ
၀ယ်ယူတဲ့လူဆီကနေ ပိုစပ်ထားတဲ့ အတွက်ကခိုးလိုက်တာပဲ။ ရွှေအကြောင်းဆိုရင်
နားမလည်တဲ့လူကများတော့ တစ်ချို့ရွှေဆိုင်တွေက ညစ်ပတ်တယ် ရွှေထည်က
၀ယ်ထားတာကြာနေပြီ ။ ၀ယ်တုန်းကဈေး နဲ့ ပြန်ရောင်းတဲ့ အချိန်ဈေးဟာလဲ
တော်တော်ကွာနေတယ်။ ဥပမာ ၀ယ်တုန်းက တစ်သိန်း ပေးထားရတယ်ဆိုရင် အခု
တစ်သိန်းခွဲလောက် ရ ရမှာ။ ဒါပေမယ့် တစ်သိန်း သုံးသောင်းလောက်ပဲ ပေးတယ်။
ရောင်းတဲ့လူကလဲ နားမလည်တော့ သုံးသောင်းလောက်မြတ်တာနဲ့ ကျေနပ်နေတယ် အဲ့ဒါမျိုးတွေ
လုပ်ကြတယ်။ ရွှေဆိုင်ကြီးတွေမှာ ရောင်းလိုက်ရတဲ့အထည် တစ်ဝက်လောက်က
ခန့်မှန်းခြေသိရပါတယ်။ ရွှေထည်များဝယ်ယူမည် ဆိုပါက ထိုကဲ့သို့ ရှိပါသည်။ တစ်ကယ်လို့
ပိုက်ဆံပျောက်ပျက်သွားမှာစိုးလို့ ရွှေဝယ်ထားချင်တယ်ဆိုရင် အခဲလိုက်ဝယ်ထားတာ
အဆင်အပြေဆုံးပါ။ တစ်ကျပ်သားကို ရောင်းဈေးနဲ့ ၀ယ်ဈေး ၁၅၀၀ ပဲခွါတယ်။ ဒါကလဲ ခေါက်ရွှေ
သီးသန့်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ ဈေးမှန်တဲ့ ဆိုင်တွေမှပါ။ တစ်ချို့ရွှေဆိုင်များစို ၀ယ်တဲ့အခါမှာ
လက်ရှိပေါက်ဈေးထက် တစ်သောင်းလောက်ပိုရောင်းတယ် ပြန်ဝယ်တဲ့အချိန်ကျတော့
တစ်သောင်းလောက် လျော့ပေးပြန်ရော ၀ယ်တော့တစ်သောင်းနာ ရောင်းတော့တစ်သောင်းနာ။
ရွာသူ ရွာသားအပေါင်းကို ဗဟုသုတဖြစ်စေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ အမှားများ
မပြည့်စုံသည်များ တွေ့ရှိရပါက ပြန်လည် ဖြည့်စွပ်ပေးကြပါရန် . . . . . . . . .
View all posts by ​မောင်​မိုဘိုင်း →
မြန်မာနိုင်ငံက ကျပ်သားသုံးပြီး တရုတ်ပြည်က ခက် လို့ခေါ်တယ်ထင်တာဘဲ….
gm နဲ့ ကျပ်သား ဆိုရင်တော့ 16.6 gm= ၁ကျပ်သား။
အနီးစပ်ဆုံးတော့ 1gm က ၁ပဲသားလောက်နီးနီး ရှိတယ်။
ရန်ကုန်မှာက တစ်ကျပ်သားကို ၁၂၈ ရွေးနဲ့  တွက်တာ
ဆက်အားပေးနေပါ့ မယ် ။
မတူတဲ့  ဒေသက အထာလေးတွေသိရတာပေါ့ နော
ရွာထဲမှာ ရွှေဆရာတွေ များလာတဲ့သဘောပေ့ါ။ :hee:
ရွေးကြီး – ရွေးလေး နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ် …
ဘယ်လိုကွာသလဲ ဆိုတာလေးလဲ သိချင်ပါတယ်ဗျ …
ရွှေထည် ကတော့ ၀တ်ဖို့ ကလွဲ ရင် စု ဖို့ ဆို မ၀ယ်တာ အကောင်း ဆုံး ပဲ ၊ နာဘက် ကချည်း ပဲ။ သူ့ ဆိုင် မှာ ပြန်ရောင်း တာ အလျော့ တွက် လက်ခ တ၀က် ပြန်ပေး တာ တခါ မှ မကြုံ ဖူးသေးဘူးရယ်။ ၀တ်ထား လို့ ချွေးတွေ၊ သနပ်ခါးတွေ နဲ့ ဂျီး တတ်နေ တာတောင် အဲဒိ အတွက် ပို လေး နေ ၇မယ့် အစား ပြန်ေ၇ာင်း ရင် အလေး ချိန် ကအမြဲလျော့ နေတယ် ဆို တာချည်း ပဲ။
ရွှေစု ချင်တယ် ဆို ရင် အခေါက် လက်ကောက် ကွင်း တွေ ဆို ရင် တော့ အဆင် ပြေတယ်။ အလျော့ တွက် ၊ မရှိဘူ။ ရောင်း ရင် ပေါက် ဈေး ပြန် ရ တယ် လက်ခ ၅၀၀၀ ပဲ လျော့ တယ်။ အနည်း ဆုံး ၁ ကျပ်သား က စ၀ယ် လို့ ရတယ်၊ ၁ ကျပ်သား လောက် ဆိုရင် တော့ အရမ်း သေး ပြီးပျော့ တယ်။ ၂ ကျပ်သားလောက် ဆို ၀တ် လို့ လဲ အဆင်ပြေတော့ လူ ရှိန် အောင် ၀တ် ထား ချင် လဲ ရတယ်။ ရွှေ လည်း စု ချင် ၊ တခါတည်း အတုံးတွေ ၊ အချောင်းတွေ အလေး ချိန် များများ စားစား မ၀ယ် နိုင် ရင် အဲလိုလေး ၀ယ်စုရင် အဆင်ပြေတယ်။
စကားစပ် ပြီး ပြော ရ ရင် မြန်မာ့ေ၇ွှအလေး ချိန် မူးတွေ ၊ ပဲ တွေ ၊ရွေး တွေ ကို နိုင် ငံ တကာ အတိုင်း ၊ ဂရမ် နဲ့ပဲ တိတိ ကျကျ ပြောင်း သုံး ကြရင်ကောင်း မယ်။
ရွှေဆိုရင်တော့ ငရွှေ ကိုအမုန်းဆုံးပဲဟေ့ (ငါးကိုပြောတာပါ)
ရွာမှာ..ဒီလို.. စာလေးတွေလည်း..လိုအပ်ပါတယ်ဗျ ။
ကျေးဇူးဗျို့။
ရောင်းတော့၃၀၀၀ ၅၀၀၀ ခွါတာပါပဲကွယ်
ရွေးကြီးစေ့က နှစ်ရွေးစေ့ကို ခေါ်တာပါ
တစ်ကျပ်သားကို ရွေးလေးနဲ့ဆိုရင် ၁၂၀ ရှိပါတယ်။
ရွေးကြီးနဲ့ ဆိုရင်တော့ ၆၀ ပဲရှိပါတယ် ဒီလိုလေးပါ။
ရွှေဆိုတာ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးတွေကို အာမခံထားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လေတော့
ပန်းတိမ်ပညာတတ်ပြီး ရွှေလေးဘာလေးခိုးတတ်ရင် မခါးဘူးလို့ဆိုရမှာဘဲ
ပြောခြင်တာက ရွှေဆိုတာ ဟိုးးးးးဘုရားမပွင့်မီအချိန်ကတည်းကသုံးနေကြတာကလား
ကျုပ်ကတော့ ရွှေကို ပေါင်လို့လွယ်တာကလွဲလို့ အခြားအကြောင်းတွက် သိပ်မကြိုက်လှဘူး
အဲ့လိုမရှုံးရအောင် ရွှေကို လက်ဝတ်လက်စားမဟုတ်ပဲ ဒီ အတိုင်းပဲ ဝယ်စုချင်ပါတယ်…။ ရွှေကို တစ်တုံးလုံး တစ်ချောင်းလုံးစာ မတတ်နိုင်လို့ ကိုယ်နိုင်သလောက် ဖြတ်စလေးတွေပဲ ဝယ်ချင်တယ်ဆို.. ဘယ်လောက်ကနေ အနည်းဆုံးစဝယ်လို့ရပါသလဲ
အဲ့ဒီနှစ်ရွေးကို ပေါင်းပြီး ကျိုခိုင်းလို့ရပါတယ်
အဲ့ဒီလိုနဲ့ နဲနဲစီ တတ်နိုင်သလောက် ၀ယ်စုလို့ရပါတယ်
ခေါက်ရွှေ တစ်ရွေးကို အခုလက်ရှိ တစ်ကျပ်သား ၇၇၀၀၀၀ ၀န်းကျင်နဲ့ဆိုရင်
တစ်ရွေးကို ၆၅၀၀ ၀န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်
သင်တန်းဆင်းလာသူတွေကိုမေးကြည့် တော့ တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ သင်တန်းလို့ပြောကြပါတယ်။